कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य ! – Khabaarpati
October 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on कुकुरले पिसाब फेर्दा एउटा खुट्टा किन उचाल्छ ? दुनियाँ चकित हुने यस्तो छ रहस्य !
घर होस् वा मन्दिर, बत्ति बाल्दा सधै ध्यान दिनुहोस् यी ५ कुरा, हुनेछन् देवि देवता प्रशन्न !